Iphupha lokukhupha isisu Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ukuqhomfa, okwaziwa njengokukhupha isisu okanye ukuphelisa ukukhulelwa, kuyaqondwa ukuba kuthetha ukupheliswa kokukhulelwa ngaphambi komhla obekiweyo wokubeleka. Ngokungafaniyo nokuphuma kwesisu, umzekelo, umfazi okhulelweyo uhlala efuna ukukhupha isisu. Nokuba ukukhupha isisu kuyinxalenye yonyango lwemihla ngemihla, umba uhlala uxoxwa kuluntu lwethu. Yiyo loo nto ingamangalisi into yokuba ukuqhomfa kungangena kumaphupha ethu.
Kodwa yintoni uphawu lwephupha "ukukhipha isisu" efuna ukukuxelela? Kutheni uyibonile ephupheni lakho? Ngaba woyika okanye waziva wonwabile? Cinga kwakhona ngephupha lakho kwaye unike ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha. Oku kubalulekile kuhlalutyo lwamaphupha. Bandakanya iimvakalelo zakho xa ulele.
Iphupha lokukhupha isisu linokucaphukisa kakhulu umntu ekuthethwa ngaye. Nangona kunjalo, amaphupha okuqhomfa ngokubanzi abhekisa kwimiyalezo ethile ebhalwe ngokomfuziselo ekufuneka itolikwe kwisiseko sobomi bomntu. Jonga amaphupha aqhelekileyo kunye neendlela ezahlukeneyo zokuwatolika kwaye ufunde okungakumbi malunga nolu phawu lwephupha:
1 Uphawu lwephupha «Ukuqhomfa» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ukukhulelwa-ukukhupha isisu: yintoni ebangela iphupha?
1.2 Ukulahla umntwana ophuphayo: liphupha elibuhlungu
1.3 Ukuqhomfa ngenkani - bubusuku obubi ngokupheleleyo!
1.4 Umntwana okhuphe isisu kunye nentsingiselo yamaphupha akho
1.5 Ikliniki yokuqhomfa iyavela kwilizwe lamaphupha
2 Uphawu lwephupha «ukuqhomfa» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ukuqhomfa» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ukuqhomfa» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Ukuqhomfa» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ukukhulelwa-ukukhupha isisu: yintoni ebangela iphupha?
Ukukhulelwa kunye nokuqhomfa kunokunxulumana ngokusondeleyo ephupheni. Ukuba el mundo Ukuphupha ngathi kuvela uphawu "ukukhupha isisu okhulelweyo", oku kunika umntu ophuphayo ukuba aqonde ukuba inqanaba elitsha lobomi liyasondela, elijamelene neenkxalabo. Apha kubalulekile ukuyijonga ngononophelo imeko kwaye uthathe izigqibo ngokufanelekileyo. Ngendlela, oku kuyasebenza nakwamaphupha apho umntu akhulelwa ngaphandle kwesondo kwaye acinge ngokukhupha isisu.
Ukulahla umntwana ophuphayo: liphupha elibuhlungu
Xa sikhupha isisu okanye umntwana emaphupheni ethu, lo mfuziselo ubonakalisa ukuba kukho amathuba kunye namathuba kwihlabathi lokwenyani, kodwa kusenokwenzeka ukuba asikaziboni okwangoku. Kwakhona, iphupha apho sikhulelwe khona kwaye sikhupha isisu kunokubonisa ukuba sinoxanduva oluninzi kakhulu.
Ukuqhomfa ngenkani - bubusuku obubi ngokupheleleyo!
Ukuba ufumana isisu esinyanzelekileyo ephupheni, kuya kufuneka uzibuze ukuba ngaba ngoku kukho indawo yobomi apho kukho uxinzelelo oluninzi. Ukuqhomfa okunyanzelweyo kunokubonisa ukuba kukho imiba kubomi bobuqu okanye beengcali ezibangela uxinzelelo kunye neemvakalelo ezingathandekiyo kulowo uleleyo.
Umntwana okhuphe isisu kunye nentsingiselo yamaphupha akho
Amaphupha okubona umntwana okhulelweyo angajika abe liphupha elibi. Okona kubi, awunakufumana imifanekiso eyothusayo yombungu ofileyo ngaphandle kwentloko yakho nasemva kokuvuka. Ngapha koko, imeko enjalo yephupha kufuneka ibe nomsebenzi wesilumkiso: lowo uleleyo akahambelani nesiqu sakhe, ubomi bakhe kunye neemvakalelo zakhe. Kuya kufuneka uphinde ucinge ukuba yeyiphi indlela ofuna ukuhamba ngayo kwikamva lakho.
Ikliniki yokuqhomfa iyavela kwilizwe lamaphupha
Iklinikhi yokuqhomfa iqondwa ngokuchazwa ngokubanzi njengesikhumbuzo sephupha: kuya kufuneka unike ingqalelo ngakumbi kwimpilo yakho kwixesha elizayo. Kwangelo xesha, uvavanyo lwezamazinyo eklinikhi lukwabonisa ukuphiliswa kweengxaki zengqondo ezinokubangela ukwahlukana.
Uphawu lwephupha «ukuqhomfa» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, ukukhupha isisu kusetyenziswa njengophawu lwephupha njenge isilumkiso iqondwe, ukuba inxulumene nemeko yezempilo okanye iqabane lobomi. Ukuphupha kufuneka kujonge ngononophelo kwihlabathi elivukayo. Esi sibini sinokungonwabi kubudlelwane, kwaye ingxoxo yokucacisa ingahamba indlela ende.
Kwakhona, ukuqhomfa ephupheni kunokuba kokwephupha. ukungaqiniseki cacisa iiprojekthi ezithile. Umphuphi usenokuba uqalise iprojekthi entsha yobungcali okanye yabucala kwihlabathi lokuvuka kwaye esoyika ukubuyela umva okanye ukuzisola ngesigqibo sakhe.
Ngamanye amaxesha uphawu lokuphupha "ukukhupha isisu" ngokokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha kunokubhekisa nakwezizayo ilahleko ukusuka emsebenzini okanye kuphuhliso kubomi bephupha, oluya kwicala elingalunganga. Iphupha kufuneka kungekudala licacise ukuba yeyiphi indlela ongathanda ukuyithatha kubomi bakho bokuvuka kwaye wenze ngokufanelekileyo.
Uphawu lwephupha «ukuqhomfa» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, ukuqhomfa njengophawu lwephupha kuhlala kufuzisela Ukwala, ukwahlukana y utshintsho. Ukuba iphupha eli likhatshwa ziimvakalelo ezakhayo, ukwahluka komntu okanye kwento kufuneka kuqondwe njengohlobo lwenkululeko.
Ukuba amava okuphupha ukuqhomfa ephupheni ngokoyika okanye ukuzisola, oku kunokuba, kuxhomekeke kutoliko lwengqondo ngephupha, kungabonisa ukungavisisani okungathandekiyo ngexesha lokwahlukana okanye iingxaki zobuntu bephupha. Mhlawumbi ukuphupha kulangazelela enye ukulungiswa isimo sakho ebomini okanye iinkolelo zakho.
Ukongeza, ukuqhomfa njengophawu lwephupha kungabonisa ukuphupha ukuba akayiphumelelanga impumelelo ayifunayo kwiprojekthi kwihlabathi eliphaphamayo. Ngoku ufuna ukubuyela apho aqale khona kunye nakuye phinda uqondise.
Mhlawumbi kule meko wayefumene indlela entsha yokucinga okanye yokuziphatha, ethi, nangona kunjalo, ayigatye ngaphakathi. Ngomfuziselo wamaphupha 'ukuqhomfa', kuya kufuneka ngoku kucace kuye ukuba unesigqibo asenzayo kwilizwe eliphaphamayo malunga nendlela afuna ukuziphatha ngayo kwixa elizayo.
Uphawu lwephupha «ukuqhomfa» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kutolika uphawu lwephupha "ukuqhomfa" njengesicelo ephupheni, isenzo salo sangaphambili Isicwangciso sobomi Ukucinga kwakhona kwaye mhlawumbi unikezele okanye ubuncinci utshintshe. Kuya kufuneka uyilungelelanise neemeko zokuphila zangoku.